Archive du 20190117
Didier Ratsiraka Tsy mbola niarahaba an-dRajoelina hatreto
Totoafo ny fiarahabana sy firarian-tsoa ho an’i Andry Rajoelina taorian’ny nanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny 8 janoary fa izy no voafidy ho filohan’ny Repoblika.
Depiote Hermann Razafindravelo “Mila traikefa, ekipa matotra ny fitantanana firenena”
Samy miandry ny fanombohan`ny asan`ny filoham-pirenena vaovao ny rehetra izay hanomboka ny 18 janoary ho avy izao.
Mba tsy ho toky fitaka anie …
Ny olom-banona tsy vonona Ny olom-bonona tsy vanona Mila olomanga ny firenena Mba hitantana ireo harena.
Fampihenana ny rano be eny amin’ny Petite Vitesse Diovina ny “Grand chenal” etsy amin’ny “Madarail”
Minitra vitsy aorian’ny filatsahan’ny orana dia efa mikaikaika ny mponina eny amin’ireo faritra iva eto an-drenivohitra amin’ny fiakaran’ny rano maloto.
Taksibe miasa eto Antananarivo Zara raha mahazo vola noho ny amboteiazy
Tena mafy ny fitohanana eto an-drenivohitra sy ny manodidina herinandro mahery izao. Simba vokatr’izany ny ankamaroan’ireo asa fitadiavana maro noho ny fotoana very eny am-pandehanana ka anisan’ireny ny fiara fitaterana.
Fiara misisika manampatra fahefana Tena fandikan-dalàna tsotra izao
Tato ho ato izay dia nanomboka maro be indray ireo fiarakodia manao ankisisika any anaty fitohanan’ny fiara, mampaneno kipantsona sy kiririoka, pirilipo eraky ny tanàna.
CUA sy mpitatitra eto Iarivo Misy ireo olana novahana avy hatrany
Taorian’ny fihaonana fifampiarabana nahatratra ny taona teo amin’ny ben’ny tanànan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA),